Singa paompy Beka, singa paompy menaka fanosotra
Home/Elan-drano/Singa paompy Beka, singa paompy menaka fanosotra
Product: Elan Pompatra Beka
1. singa paompy ho an'ny Beka fanosotra menaka paompy
2. Ny kofehy mahazatra ho an'ny fanoloana mora ny paompy Beka, garantie voafetra 1 taona
3. Ny kapoka amin'ny fanaterana piston tsara indrindra, ny refin'ny fahamendrehana eo amin'ny singa
Beka Pump Element Fampidirana
Ny singa paompy Beka dia nosoloina ny paompy fanosotra Beka, ho ampahany amin'ny fanoloana paompy.
Ny singa paompy dia vokatry ny kodiaran'ny eccentricity manao ny hetsika fanosehana sy fisintonana ny piston amin'ny singa paompy, mba hitsentsitra menaka na menaka ao amin'ny efitranon'ny singa, avy eo ny menaka na menaka dia voatsindry ao amin'ny tsipika fantsona.
Fametrahana singa paompy Beka
Tokony hijanona ny paompy fanosotra rehefa mametraka na manala ny singa paompy. Mba hametrahana ny singa paompy, ny piston dia tokony hiitatra amin'ny ampahany ary manana zoro eo amin'ny 30 degre eo ho eo, ampidiro ao anaty lavaka misy paompy ny piston (Jereo ny sary A).
Ny lohan'ny piston singa dia mihaona amin'ny peratra fanerena, avy eo mamindra ny singa paompy amin'ny lalana mitsangana (Jereo ny sary B). Mandra-pahatongan'ny lohan'ny piston dia mihazakazaka ao amin'ny tsipika mpitari-dalana.
Ampifandraiso amin'ny tranon'ny paompy ny bolt an'ilay singa.
Raha esorina ny singa paompy, dia mifanohitra amin'ny dingana etsy ambony.
Azafady, ataovy azo antoka fa ny piston singa dia tokony hijanona ao anaty tranony rehefa esorina, fa tsy tavela ao amin'ny tranon'ny paompy fanosotra.
[email voaaro]2021-11-17T21: 52: 27 + 00: 00
Singa paompy SKF, singa paompy menaka fanosotra
Singa paompy Lincoln, singa paompy menaka fanosotra
Singa paompy, DDRB-N, ZB Electric Lubrication Grease Pump Element